Diplaoma katolika: CEPE, BEPC, Bacc, manomboka amin’ity taona ity - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
• Sehatra iasan’ny Fiangonana manerana ny Nosy ny Fanabeazana. Azonao omena tarehimarika sasantsasany mikasika ny sekoly katolika eto Madagasikara ve?
- Ny isan’ny sekoly katolika eto Madagascar (statistiques 2017-2018) dia toy ireto manaraka ireto : Préscolaire=478, Primaire=2089, Kolejy=359, Lycées=138. Ny isan’ny mpianatra ao amin’ireo dia mitsinjara toy izao : Préscolaire=73344, Primaires=372562, Collèges=149806, Lycées=69588. Ny isan’ny mpampianatra kosa dia : Préscolaires=2097, Primaires=9808, Collèges=6665, Lycées=3373. Ny isan’ny sekoly ambony dia 22
• Re tato ho ato fa hamoaka diplaoma CEPE, BEPC ary Bakalorea katolika ny Dinec. Azonao hazavaina misimisy kokoa ve ny momba izany?
- Araka ny hevitra tapaka nandritra ny Filankevitra nasionalin’ny Fanabeazana katolika izay notanterahana tany Antsiranana tamin’ny volana aogositra 2018 dia hanatanteraka fanadinana iombonana manerana ny Nosy ny Fanabeazana katolika ary ahazoana mari-pahaizana katolika izany dia ny CEPE, BEPC, Baccalauréat. Ireo mari-pahaizana ireo dia heverina fa manankery eo amin’ny sehatra katolika ary ilain’ireo sehatra manome lanja azy. Eo anatrehan’ny fanadinam-panjakana dia mijanona ho toy ny “examen blanc” ihany izany, saingy marihana amin’ny mari-pahaizana katolika.
• Rahoviana no hanombohana an’izy io?
Amin’ity taom-pianarana 2018-2019 ity no hanombohana izany.
• Miohatra amin’ny fanadinam-panjakana, inona no lanjan’ireo diplaoma katolika ireo?
- Tsy mahasolo ny mari-pahaizana avy amin’ny fanadinam-panjakana ireo fa manan-kery kosa amin’ireo sehatra manome lanja azy, izany hoe manan-kery izy ho an’izay rehetra matoky ny Fanabeazana katolika.
• Ny eto amintsika ve no sambany hanao toa izao, sa efa misy hafa? Inona no anton’izany fanapahan-kevitra izany?
- Araka ny tsikaritra aloha dia sambany tokoa vao hanao toa izao ny ato amin’ny Fanabeazana katolika eto Madagasikara, ary tsy dia heverina ho zava-baovao be anefa izany fa maro ireo sekoly katolika eo anivon’ny diosezy tsirairay no efa manao examen blanc fa saingy samy manana ny azy sady tsy nasiana mari-pahaizana. Amin’ity indray mitoraka ity kosa dia sady fanadinana iombonana no ahazoana mari-pahaizana, anjaran’ny diosezy tsirairay ny mandamina ireo toerana hanaovana fanadinana sy miantoka ny fanatanterahana azy. Mivoaka avy ao amin’ny Foibe nasionalin’ny Fanabeazana Katolika ny laza adina ary ny diosezy no mitsinjara izany. Ny anton’izao fanapahan-kevitra izao moa dia ho fanomezan-danja ny Fanabeazana sy ny Fampianarana katolika aorian’ny ambaratonga vitan’ny mpianatra, sady hanehoana ny fiombonana sy ny firaisan-kina
• Hisy fampitoviana lenta takiana eo amin’ny fampianarana amin’ny samy sekoly katolika manerana ny Nosy, vokatry ny famoahana ireo diplaoma ireo. Azo antoka ve ny hahatratrarana izany?
- Koa satria laza adina mitovy no hanadinana ny mpianatra rehetra isaky ny ambaratonga, mazava ho azy fa hisy araka izany ny fampitoviana lenta takiana eo amin’ny fampianarana amin’ny samy sekoly katolika manerana ny Nosy. Ary ireo mpiara-miasa rehetra any an’ivon’ny diosezy dia hanaraka antsakany sy andavany ny fepetra rehetra hahatanteraka an’izany. Azo eritreretina tsara ny hahatratrarana izany raha jerena ny fiaraha-miasa hatramin’izay tamin’ny fanatanterahana ny ezaka maro iombonan’ny Fanabeazana katolika eto amin’ny firenentsika. Mbola hisy koa ny fanombanana mialoha ny fanatanterahana izany mandritra ny Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika eto Madagasikara izay hotontosaina ny 20 mey ka hatramin’ny 24 mey 2019 any Antsirabe.
• Azonao omena kosa ve ny taham-pahombiazan’ny mpianatra amin’ny sekoly katolika amin’ny ankapobeny amin’ny fanadinam-panjakana?
- Amin’ny ankapobeny dia eo amin’ny 75% eo ho eo ny taham-pahombiazan’ny mpianatra amin’ny sekoly katolika amin’ny fanadinam-panjakana. Ny sekoly katolika eny andrenivohitra dia saika mihoatra ny 80% ny taham-pahombiazana fa ny any ambanivohitra no somary latsaka kokoa.
•Inona no heverinao fa tena olana eo amin’ny fanabeazana manerana ny Nosy? Inona kosa ny olana ho an’ny fanabeazana any amin’ny sekoly katolika manokana?
- Ny tena olana eo amin’ny fanabeazana manerana ny Nosy dia ny tsy fahampian’ny mpanabe afaka manabe araka ny tokony ho izy, indrindra hatramin’ny taona 2003 no ho mankaty, satria olona tsy manana ny fahaiza-manao amin’ny fanabeazana no nantsoina hanabe. Manampy trotraka izany koa ny fahantrana sy ny toetsaina tsy te hivoatra eo amin’ny ankamaroan’ny ray aman-dreny niteraka. Ny fihazakazaky ny fandrosoana ihany koa etsy ankilany dia misarika ny mpianatra tsy hifantoka amin’ny fianarana.
- Raha ny sekoly katolika manokana no jerena dia mbola olana goavana ihany koa ny fahantrana na ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny niteraka.
• Manao ahoana àry ny endriky ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny Fitondrana (amin’ny alalan’ny Minisitera misahana ny fanabeazana sy ny fampianarana) sy ny Dinec amin’ny fametrahana ny rafi-pampianarana sy fanabeazana mahomby?
- Amin’ny fametrahana ny rafi-pampianarana sy fanabeazana mahomby dia tsy maha afa-po loatra ny fifanakalozan-kevitra noho ireto antony manaraka ireto : ny fiantsoana tampotampoka izay tsy ahafahana mandamina fotoana, ny tsy fandraisana ny soso-kevitra natolotra hatrany am-piandohana, ny fakan-kevitra voalaza fa notanterahana nefa tsy tafapaka hatrany ifoton’ny fanabeazana katolika. Raha fintinina ny tena fototr’olana dia ny tsy fampiharana araka ny tokony ho izy ny fiaraha-miombon’antoky ny miankina sy ny tsy miankina.
Nanangona : Razafimamonjy Noro Hanitra